Otu esi etinye Linux Kernel 5.14 na Rocky Linux 8 - LinuxCapable
Otu esi etinye Linux Kernel 5.14 na Rocky Linux 8
October 30, 2021 September 3, 2021 by Jọshụa James
Kernel 5.14 Atụmatụ ọhụrụ
Bubata ma wụnye igodo ELRepo & GPG
Wụnye kernel kacha ọhụrụ 5.14
Mmelite maka kernel 5.14
Linux kernel 5.14 nwere ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ, nkwado na nchekwa. Mwepụta kernel Linux 5.14 agabigala ndị ntọhapụ asaa n'ime ọnwa abụọ gara aga yana rite uru site na ntinye aka nke ndị nrụpụta 1,650 dị iche iche. Ndị na-enye aka na mmepe kernel Linux gụnyere ndị na-enye aka na ndị na-ere ahịa a ma ama dị ka Intel, AMD, IBM, Oracle, na Samsung.
Enwere nnukwu ndepụta mgbanwe maka 5.14; ụfọdụ gụnyere:
AMD Smart Shift laptọọpụ.
Nkwado AMD SFH maka ihe mmetụta ọkụ na nchọpụta ọnụnọ mmadụ na laptọọpụ AMD Ryzen ọhụrụ.
Usoro ịgba ọsọ ACPI Platform (na-enye ohere ịwepụ ụfọdụ njikwa sistemu na-egbochi ndị na-ahụ maka sistemu na ọnọdụ njikwa sistemu wee banye n'ọnọdụ mkpochapụ OS/VMM).
interface nhazi nhazi nke isi iji nyere aka belata ohere onye ọrụ na oghere onye ọrụ yana mwakpo-na-kernel.
Nkwado laptọọpụ nzuzo Dell Hardware.
Sistemụ Faịlụ Flash-Enyi na Enyi na-agụ naanị mode.
Oku hyper-V kacha ọsọ ọsọ maka ndị ọbịa Hyper-V.
Intel P-State maka ngwakọ ngwakọ maka Alder Lake.
Nkwado Raspberry Pi 400.
Nkwado maka eserese Intel Alder Lake P.
Onye njikwa Microsoft Xbox One na -ahọrọ/kekọrịta bọtịnụ nkwado.
memfd_secret bụ oku usoro nke na-enye ikike ịmepụta ebe nchekwa nke a na-ahụ anya naanị na usoro nke nwe ya (ma ọ bụghị nke usoro ndị ọzọ ma ọ bụ ọbụna tebụl kernel na-edepụta).
Nkwado Qualcomm Adreno 660 GPU.
Iji hụkwuo, gaa na kernel changelog.
OS akwadoro: Rocky Linux 8.+.
Melite gi Nkume linux Sistemụ arụmọrụ iji hụ na ngwugwu niile dị adị adịla ugbu a:
Ka ịtọlite ​​akaụntụ sudo dị adị ma ọ bụ ọhụrụ, gaa na nkuzi anyị na Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Rocky Linux.
Nzọụkwụ mbụ bụ ibubata ebe nchekwa site na ELREPO si oru ngo ELRepo. Nke a nwere kernel kachasị ọhụrụ ma ọ bụ ụdị LTS nwere mmelite oge niile, yabụ ebe nchekwa a ga-edobe ịnata mmelite ozugbo ewepụtara ha.
Mbụ, bubata igodo GPG iji nyochaa ngwungwu nwụnye:
Ọzọ, wụnye ebe nchekwa ahụ, jiri iwu a:
Ụdị "Y," wee pịa "Tinye igodo" aga n'ihu.
Site na ebe nchekwa na GPG bubata, ị nwere ike ịga n'ihu ịwụnye kernel 5.14 kachasị ọhụrụ site na iji iwu ọnụ na-esote:
Iji wụnye nke kacha ọhụrụ kernel nkwado ogologo oge (LTS):
Ugbu a malitegharịa sistemụ Linux Rocky gị; n'oge windo buut na nhọrọ nke kernels ịhọrọ site na, họrọ kernel 5.14.
Ozugbo laghachi na sistemụ Rocky Linux gị, nyochaa kernel wee wuo:
Ekele, ị tinyela kernel 5.14 kachasị ọhụrụ na sistemụ Rocky Linux 8 gị.
Iji dobe kernel 5.14 gị ka ọ dị ọhụrụ, ị ga-eji iwu mmelite dnf dị ka imelite sistemụ Rocky Linux ndị ọzọ, ebe ọ bụ na ị bubatala ebe nchekwa ELRepo. Ka ịlele maka mmelite:
Ọ bụrụ na mmelite dị, jiri ihe ndị a:
Cheta, maka mmelite kernel ọ bụla, ị ga-achọkwa ịmalitegharị sistemụ gị:
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye kernel 5.14 kacha ọhụrụ na Linux Rocky gị. Rịba ama, ọ bụrụ na sistemụ gị bụ ihe nkesa na-emepụta ihe, a ga-adụ ọdụ ka ị jiri kernel dị ugbu a na-ebugharị na Rocky Linux maka nkwụsi ike kachasị. Otú ọ dị, maka ndị na-achọ ịnwale kernel 5.14, ị nwere ike gbanwee azụ na kernel gara aga n'ụzọ dị mfe na menu buut, yabụ ịnwale ya abụghị echiche ọjọọ, karịsịa ma ọ bụrụ na ịnweta ngwaike ọhụrụ nke Rocky na-akwadoghị. Linux kernel.
Categories Nkume linux Tags Linux kernel, Nkume linux Mail igodo
Otu esi etinye ma ọ bụ kwalite Nvidia ọkwọ ụgbọ ala na Rocky Linux 8